Satria Mihamafy Ny Fihetsiketsehana, Voakenda ny Fahitalavitra Antserasera sy ny Tranokalam-baovao ao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Aymara, Français, Deutsch, English
Pejy fandraisan'ny vavahadim-baovao IPYS “Navegar, con Libertad” (mijery an-kalalahana).
Ny marainan'ny 7 Aprily, nitatitra ireo mpiserasera Venezoeliana fa tsy afaka niditra tamin'ny fantson'ny tranonkala fahitalavitra Vivoplay avy ao anatin'ny firenena. Nitatitra indray ny hafa nanomboka teo fa tsy azo idirana ihany koa ny fahitalavitra VPITV sy El Capitolio.
Nandefa ny fihetsiketsehana tao Caracas, nokarakarain'ireo manohitra ny fitantanan'i Nicolás Maduro ireo fahitalavitra ireo sy ny fantsona tranonkala fahitalavitra hafa. Notontosaina tamin'ny herinandro lasa ny fihetsiketsehana, taorian'ny nanafoanan'ny [mg] Fitsarana Tampony ao amin'ny firenena ny parlemanta [mg] sy nampisahanana ny asany ho an'ny [fahefana] mpanatanteraka sy ny Fitsarana Tampony tenany.
Namoaka ny vokatry ny andrana traceroute ilay mpanao gazety sady mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Luis Carlos Díaz, mampiseho fa tapitra [time out] ny fifandraisana ary novelomin'ireo mpiserasera ny VPN ( tambajotra virtoaly manokana) mba hifandraisana.
Alefaso ny VPN anao. Toa miverina ny fanakatonana tranonkala ao amin'ny mpamatsy tolotra aterineto Venezoeliana. Tao amin'ny tranonkalan'ny @VivoPlayNet ity.
Malaza eo amin'ny Venezoeliana, izay afaka miditra aterineto, indrindra amin'ny fotoanan'ny korontana ny tolotra tahaka ny Vivoplay. Misalasala hatrany ireo fampahalalam-baovao nentin-drazana handefa ny fihetsiketsehana nanomboka tamin'ny taona 2014, raha nandrahona hampandoa onitra azy ireo ny Vaomieran'ny Fifandraisandavitra noho ny fitateram-baovaon'ny fihetsiketsehana, fihetsika izay sokajian'ny Vaomiera ho “fandrisihana herisetra.”
Raha tsy misy fahitalavitra mandeha an-tariby sy tsy misy fantsom-pirenena manome vaovao, ampiasaiko indray ny kaontiko ao amin'ny @vivoplaynet. Gaga aho fa mbola mora kokoa noho ny soda roa litatra izany.
Nanamafy avy eo ny fikambanana tsy miankina eo an-toerana VEsinfiltro [Venezoela tsy voasivana] fa tsy ny Vivoplay ihany no tsy azo nidirana noho ny fanakanana ny rafitra anaran-tsehatra (DNS), fa ny fantsona fahitalavitra antserasera roa hafa koa, anisan'izany ny tranonkala mpandefa fandaharana mivantana ampiasain'ny Antenimieram-pirenena mba handefasana ny fivorian'izy ireo.
Nanaporofo ny fikarohana teo aloha avy amin'ny Ivon-toerana ho an'ny Gazety sy ny Fiarahamonina (IPYS), vondrona mpikaroka momba ny zo nomerika ao Venezoela fa indraindray mampiasa fanakanana DNS ireo mpanome tolotra aterineto eo an-toerana, teknika izay mamaly am-pahadisoana ny fangatahana sehatra iray manokana ny lohamilina anaran-tsehatra. Rehefa voasakana ny tranonkala iray, hamaly am-pahadisoana na handà ny fangatahana ny lohamilina rehefa antsoina ny tranonkala.
Manamafy ny fanakanana DNS izahay: @elcapitoliotv [http://elcapitolio.tv ] @VPITV [http://vpitv.com ] sy @vivoplaynet [http://vivoplay.net ]
Nahitàna fahatapahana ihany koa omaly ny fandaharana mivantana an'ny fantsona fahatelo izay efa voasakana, VPITV raha nosamborin'ny polisy ny mpaka sarin'ny VPITV [mg] Elvis Flores, izay nandefa mivantana ny fihetsiketsehana tao Caracas. Voadaroka i Flores tamin'izy notanàn'ny polisy. Navotsotra izy adiny valo taty aoriana ary niverina indray ny fandaharana mivantana tao amin'ny VPITV. Raha mbola azo jerena ao amin'ny Youtube ny sasany amin'ireo fandaharan'ny tranonkala, misy ihany koa ny tatitra fa manakenda ny fifandraisana aterineto ny governemanta, ka lasa sarotra ho an'ny Venezoeliana ny mahazo fampahalalam-baovao marolafy satria misy ankehitriny ireo zava-mitranga ao amin'ny firenena.